Isimiso esisebenzayo sesando sikagesi kanye nezindaba ezidinga ukunakwa lapho zisetshenziswa
Sisebenza kanjani isando sikagesi Isando sikagesi siwuhlobo lokuprakthiza kagesi, ikakhulukazi olusetshenziselwa ukubhola kukhonkolo, phansi, odongeni lwezitini nasetsheni, isando esisebenza ngogesi esiningi singafaniswa ne-drill efanelekile ne-drill, isando, isando sokuprakthiza, ifosholo kanye ezinye izinhloso zokusebenza okuningi. I ...
Iseshini ye-129th yeCanton Fair ihlelwe ku-inthanethi kusuka ngo-Ephreli 15 kuya ku-24
I-China Import and Export Fair, eyaziwa nangokuthi yiCanton Fair, isungulwe ngo-1957. Iphethwe ngokubambisana nguMnyango Wezohwebo wePRC kanye noHulumeni Wabantu WesiFundazwe saseGuangdong futhi ihlelwe yiChina Foreign Trade Center, ibanjwa njalo entwasahlobo nasekwindla e I-Guangzhou, China. Ku-2020, ngokumelene ne ...
Ukuhlaziywa Kwesimo Samanje Nentuthuko Ithemba Lemboni Yamathuluzi Kagesi
Ngokuthuthuka kokuhwebelana kwembulunga yonke kwezomnotho kanye nokuthuthuka okusheshayo kwemakethe yamathuluzi kagesi, i-Intanethi iguqule imodeli yebhizinisi yezimboni eziningi zendabuko eminyakeni edlule. Njengomkhakha wendabuko, amathuluzi kagesi nakanjani kufanele amukele inselelo ye-Intanethi. Amandla amaningi ...